The Standard Time Edition: International | ဓါတ်ပုံ
အနုပညာရှင်များပါ စိတ်ဝင်စား လာသည့် ညောင်ချောင်းသာ အပန်းဖြေစခန်း ကာလာသင်္ကြန်ဖက်ရှင် နွေဦးအိမ် ပညာရေးနှင့် သိပ္ပံသုတေသန အတွက် ကိုယ်ပိုင်ကြွယ်ဝ မှုများအား လှူဒါန်းနေသည့် ဇူကာဘတ်ဂ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လေကြောင်း လုပ်သား လိုအပ်ချက် မြင့်မားလာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်နှင့် ပတ်သက်သည့် Guide Book နှင့် မြေပုံတို့ကို ဘာသာစကား လေးမျိုးဖြင့် ထုတ်ဝေမည် ပြည်တွင်း
အနုပညာရှင်များပါ စိတ်ဝင်စား လာသည့် ညောင်ချောင်းသာ အပန်းဖြေစခန်း
အနုပညာရှင်များပါ စိတ်ဝင်စား လာသည့် ညောင်ချောင်းသာ အပန်းဖြေစခန်း ရန်ကုန်မြို့ More... by admin | Published2years ago
ပညာရေးနှင့် သိပ္ပံသုတေသန အတွက် ကိုယ်ပိုင်ကြွယ်ဝ မှုများအား လှူဒါန်းနေသည့် ဇူကာဘတ်ဂ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လေကြောင်း လုပ်သား လိုအပ်ချက် မြင့်မားလာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်နှင့် ပတ်သက်သည့် Guide Book နှင့် မြေပုံတို့ကို ဘာသာစကား လေးမျိုးဖြင့် ထုတ်ဝေမည် ဗန်ပါစီ ဖိအားဒဏ် ခံစားနေရဖွယ် ရှိကြောင်း ဆြာအဲလက်စ်ကဆို အနုပညာရှင်များပါ စိတ်ဝင်စား လာသည့် ညောင်ချောင်းသာ အပန်းဖြေစခန်း
အနုပညာရှင်များပါ စိတ်ဝင်စား လာသည့် ညောင်ချောင်းသာ More... ကာလာသင်္ကြန်ဖက်ရှင် နွေဦးအိမ်
ကိုယ်နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး ဆံပင်အရောင်ကို ရွေးချယ်နိုင်စေဖို့ More... ပညာရေးနှင့် သိပ္ပံသုတေသန အတွက် ကိုယ်ပိုင်ကြွယ်ဝ မှုများအား လှူဒါန်းနေသည့် ဇူကာဘတ်ဂ်
Facebook ကုမ္ပဏီနှင့် အလွန်နီးစပ်သူ တစ်ဦးက ကုမ္ပဏီ၏ အမှုဆောင် More... မြန်မာနိုင်ငံတွင် လေကြောင်း လုပ်သား လိုအပ်ချက် မြင့်မားလာ
လေကြောင်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာ မည့် အနေအထား အရ More... ရွှေတိဂုံစေတီတော်နှင့် ပတ်သက်သည့် Guide Book နှင့် မြေပုံတို့ကို ဘာသာစကား လေးမျိုးဖြင့် ထုတ်ဝေမည်
ရွှေတိဂုံစေတီတော်နှင့် ပတ်သက်သည့် Guide Book (လမ်းညွှန်စာအုပ်) More... ဗန်ပါစီ ဖိအားဒဏ် ခံစားနေရဖွယ် ရှိကြောင်း ဆြာအဲလက်စ်ကဆို
ဗန်ပါစီ၏ မန်ယူကစားသမားဘ၀ ပထမရာသီတွင် ယခုအခါ ဖိအားဒဏ်များ More... အိုးထရက်ဖို့ဒ် မှာ ကစားခွင့်ရတာ စိတ်ကျေနပ်ဖို့ ကောင်းပါတယ် – နီမန်ဂျာ ဗီဒစ်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ခေါင်းဆောင် နီမန်ဂျာ More... ရာဖေးလ်ကို ချီးကျူးခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူဟောင်း
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းမှာ ၁၉၇၆ ကနေ ၁၉၉၀ အထိ More... စီးပွားရေး
စီးပွားရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးမြှင့်ရန် မြန်မာနှင့် စင်ကာပူ နားလည်မှု စာချွန်လွှာငါးခု ရေးထိုး
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံအကြား စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးမြှင့်ရန်အတွက် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ More... အေးရှားဝေါလ် အပါအ၀င် ကုမ္ပဏီသုံးခုအား BOT စနစ်ဖြင့် လမ်းတံတားကြေး ကောက်ခွင့် MIC မှ ဆက်တိုက်ချပေး
အေးရှားဝေါလ် အပါအ၀င် ကုမ္ပဏီသုံးခုအား လမ်း တံတားများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း၍ လမ်းတံတား ကောက်ခံသည့် လုပ်ငန်းများ ကို မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု More... ဂျပန်နှင့် တောင်ကိုရီးယား အခြေစိုက် Lotteria အသင့်စား စားသောက်ဆိုင် ရန်ကုန်မြို့တွင် ဧပြီ ၁၁ ရက်နေ့ စတင်ဖွင့်လှစ်မည်
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့နှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့တို့တွင် ရုံးချုပ်ဖွင့်လှစ်ထားသော Lotteria အသင့်စား စားသောက်ဆိုင်ကို ရန်ကုန်မြို့၌ More... နိုင်ငံရေး
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဇနီး အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဂျင်မီကာတာအား လက်ခံတွ့ဆုံ
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဂျင်မီကာတာ သည် ဧပြီလ ၃ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ညနေ ၅ နာရီ More... အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဂျင်မီကာတာနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ တွေ့ဆုံနေစဉ်
အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဂျင်မီကာတာ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ နေပြည်တော်သို့ ဧပြီလ ၂ ရက် က ရောက်ရှိလာ ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် More... ဆောင်းပါး
နိုင်ငံတော်သစ်ကို ဘာနဲ့ တည်ဆောက်မလဲ
အချို့ကတော့ နိုင်ငံတော်ကို စစ်အင်အား နဲ့ တည်ဆောက် ကြတယ်။ ဒါဟာလည်း သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ မှန်ပါတယ်။ More...	ရွေးကောက်ပွဲသစ်၊ သမ္မတသစ်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးသစ်
၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ သည် လက်တစ်ကမ်း အကွာ သို့ ပြန်ရောက်နေပြီး ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင် More...	အနုပညာ
ပရိသတ် စံချိန်တင် ကြည့်ရှုအားပေး ခဲ့သည့် စိုးသူ၏ အခမဲ့ တစ်ကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေပွဲ
သရုပ်ဆောင် အဆိုတော်စိုးသူ၏ တစ်ကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေပွဲကို မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ မိုင်ဒါကွင်း တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ သည်။ အဆိုပါ...
Michael Learns To Rock ၏ ဖျော်ဖြေပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၌ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်
ကမ္ဘာကျော် Michael Learns to Rock အဖွဲ့၏ Twitter စာမျက်နှာ တွင် မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့...
မသန်စွမ်းသူများ အတွက် သံတမန် များအဖြစ် ဇော်ဝင်းထွဋ်နှင့် ချစ်သုဝေ တို့အား ခန့်အပ်
မသန်စွမ်းသူများ အနုပညာပွဲတော် အတွက် သံတမန်များ အဖြစ် အဆိုတော် ဇော်ဝင်းထွဋ်နှင့် သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ချစ်သုဝေ တို့အား ခန့်အပ်ပွဲနှင့် အဆိုပါ အနုပညာ ပွဲတော် အမှတ်တံဆိပ်...
အနုပညာရှင်များပါ စိတ်ဝင်စား လာသည့် ညောင်ချောင်းသာ အပန်းဖြေစခန်း ရန်ကုန်မြို့ မှ ၃၅ မိုင်ခန့် ကွာဝေးပြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ညောင်တုန်းမြို့နယ် အတွင်းရှိ ညောင်ချောင်းသာ ဟု လူသိများသော ရန်ကင်းသာ ကမ်းခြေကို ပြည်သူပြည်သား More...	ကာလာသင်္ကြန်ဖက်ရှင် နွေဦးအိမ်..
ပညာရေးနှင့် သိပ္ပံသုတေသန အတွက်..
ဗန်ပါစီ ဖိအားဒဏ် ခံစားနေရဖွယ် ရှိကြောင်း ဆြာအဲလက်စ်ကဆို
ဗန်ပါစီ၏ မန်ယူကစားသမားဘ၀ ပထမရာသီတွင် ယခုအခါ ဖိအားဒဏ်များ ခံစားနေရဖွယ်ရှိကြောင်း ဆြာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ။
ဗန်ပါစီသည် More...	အိုးထရက်ဖို့ဒ် မှာ ကစားခွင့်ရတာ စိတ်ကျေနပ်ဖို့ ကောင်းပါတယ် – နီမန်ဂျာ ဗီဒစ်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ခေါင်းဆောင် နီမန်ဂျာ ဗီဒစ် က မိမိသည် အိုးထရက်ဖို့ဒ် ရောက်မှ မွေးဖွားခဲ့သူ More...	ရာဖေးလ်ကို ချီးကျူးခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူဟောင်း
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းမှာ ၁၉၇၆ ကနေ ၁၉၉၀ အထိ ကစားခဲ့ ဖူးတဲ့ နောက်ခံလူ တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သူ မိုက် More...	ကမ္ဘာ့သတင်း
မြောက်ကိုရီးယားက အမေရိကန်နှင့် တောင်ကိုရီးယား ကို နျူကလီးယားများဖြင့် တိုက်ခိုက်ရန် အတည်ပြု
မြောက်ကိုရီးယား စစ်တပ်သည် အမေရိကန်နှင့် တောင်ကိုရီးယားကို အဆင့်အမြင့်ဆုံး နျူကလီးယား လက်နက်များဖြင့် အညှာအတာ ကင်းမဲ့စွာ တိုက်ခိုက်ရန် More...	တရုတ်အိမ်ဈေးနှုန်းများ မတ်လတွင် မြင့်တက်
အိမ်ဈေးကစားမှုများကို ထိန်းချုပ်သော အစိုးရ၏ မူဝါဒသစ်များကြောင့် မတ်လတွင် တရုတ် အိမ်ဈေးနှုန်းများ More...	၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် အလွန်အမင်း ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်အောင် ကြိုးပမ်းရန် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ တိုက်တွန်း
၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် အလွန်အမင်း ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရေး တစ်ကမ္ဘာလုံး ကြိုးပမ်း ကြရန် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ More...	ပတ်ဝန်းကျင်
ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ မြန်မာဒုက္ခသည်များ နေထိုင်ရာ စခန်းတစ်ခုတွင် မတ် ၂၂ ရက်နေ့က မီးလောင်ကျွမ်း မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လူ ၄၂ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး အများအပြား More...	နိုင်ငံခြားသားများ တားမြစ်ကန့်သတ် လုပ်ငန်းများ၌ မတည်ငွေလုံးငွေရင်း၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့် ရရှိမည်
တစ်ဦးတည်းပိုင် ကုန်သွယ်မှုကတ်ဖြင့် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ကျပ်သန်း ၅၅၀ ကျော်ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လေကြောင်း လုပ်သား လိုအပ်ချက် မြင့်မားလာ
လေကြောင်းကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာ မည့် အနေအထား အရ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀ အတွင်း လေကြောင်း ဆိုင်ရာ လုပ်သားပေါင်း သုံးသိန်းတစ်သောင်း နီးပါး လိုအပ်ချက် ရှိလာ မည်ဖြစ်ကြောင်း More...	CDMA-800 Sim Card များကို ငွေ ၁၅၀၀ ကျပ်ဖြင့် တစ်လလျှင် အလုံးရေ ၃၅၀၀၀၀ အား တစ်နိုင်ငံလုံး၌ ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် စရောင်းမည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်မည်
အင်္ဂါဂြိုဟ်ထက် ကြာသပတေးဂြိုဟ်၏ လက သက်ရှိများနေရန် ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိ
နာဆာအဖွဲ့မှ သိပ္ပံပညာရှင်များက ကျွန်ုပ်တို့၏ စကြ၀ဠာအတွင်း ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပြီးပါက More...	နည်းပညာ
အသုံးပြုသူ စိတ်ကြိုက် သတင်း အပြင်အဆင် ထားနိုင်မှုနှင့် ပိုမိုကြီးမားသော ဓာတ်ပုံများ ပါဝင်သည့် ပင်မစာမျက်နှာသစ် Facebook မိတ်ဆက်
Facebook စာမျက်နှာတွင် မိတ်ဆွေများ၏ သတင်းများနှင့် ကမ္ဘာ့သတင်း များကို More...	ကျန်းမာရေး
ပြုပြင်ထားသော အသားများ စားသုံးခြင်းက သက်တမ်း တိုစေကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ
၀က်အူချောင်း၊ ကြက်သားပြား၊ ၀က်သားပြားနှင့် အခြားပြုပြင်ထားသော More...	Comments
Mr WordPress on မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်မှ ဆိပ်ကမ်း ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ လုပ်ငန်း အဆင့် အချို့အား စတင်ဖြေလျှော့ ကမ္ဘာ့သတင်း
Join Us on Facebook	Copyright by The Standard Time. All Rights Reserved 2013.